Nalapani - Page 1696 of 1844 -
जीवन र मृत्युलाई हिन्दु धर्ममा यसरी व्याख्या गरिएको छ
‘मृत्यु’ जीवनको एक हिस्सा हो। मृत्युको बारेमा विभिन्न धर्मले आ-आफ्नै व्याख्या गरेको छ। मृत्युका कारण, मृत्यु पछिको नयाँ जन्म आदिको धर्म अनुसार केही कुरा फरक भेटिएपनि आत्मा भने अमर हुने सुन्दै र पढ्दै आएका छौँ। मृत्यु पछि के हुन्छ? कहाँ गइन्छ? यी सबैभन्दा रहस्यमा रहेका प्रश्न हुन, जुन सायदै समाधान होलान। मृत्यु र आस्था रहस्यमय भएकै कारण अधिकांशले… Read More »
किन पिपलको रूखलार्इ देवता मानेर पुजा गरिन्छ ? जानी राख्नुहोस्
शनिबार पिपलको परिक्रमा, पूजा गर्नु, दियो बाल्नु तथा जल चढाउनु अति नै शुभ मानिन्छ। धर्मशास्त्रमा वर्णन भए अनुसार पिपलको पूजा केबल शनिबार मात्र गर्नुपर्दछ। पुराणमा भनिए अनुसार समुन्द्र मन्थनको समयमा देवी लक्ष्मी भन्दा अगाडि उनकी दिदि, अलक्ष्मी उत्पन्न भईन्, र पछि लक्ष्मी आइन। अनि देवी लक्ष्मीले श्रीविष्णुको रुप धारण गरिन, यसबाट अलक्ष्मी रुष्ट बनिन। यस्तो देखेर श्रीविष्णुले अलक्ष्मीलाई… Read More »
कस्तो रंग ल्याएर लगाए जनप्रतिनिधिले यो? एउटा शाैचालय रंग्याउनै १० लाख खर्च ! पढ्नुहोस्
साउन,११/कपिलवस्तुको तिलौराकोटको शौचालय रंग्याउन छुट्याइएको रकममा अनियमितता भएको छ । पुराताŒिवक स्थल तिलौराकोटमा बनेको सार्वजनिक शौचालय मर्मत तथा रंगरोगनका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको थियो । वडा ३ मातहतको काममा झण्डै आठ लाख अनियमितता भएको स्थानीयले दाबी गरेका छन् । शौचालय मर्मत तथा रंगरोगनका लागि कपिलवस्तु नगरपालिकाले योजनासमेत बनाएको छैन । योजनाबिनै बनेको शौचालयमा प्रयोग भएका पाइप तथा… Read More »
काठमाडौंबाट स्याङजा हिंडेको बस त्रिशुलीमा खस्यो७ जनाको मृत्यु, २२ को उद्धार
काठमाडौंबाट स्याङजाकाे वालिङ जाँदै गरेकाे बस त्रिशुली नदीमा खसेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले बस चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, तुम्लिङटारस्थित सडकबाट एक सय किलोमिटर तल खसेको जानकारी दिएकोे छ। बस र ट्रक एकआपसमा ठोकिँदा बस नदीमा खसेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख वेदप्रसाद गौतमले बताए। ना ६ ख २५०६ नम्बरको यात्रुबहाक बस र ना ५ प ७४०९ नम्बरको… Read More »
अशोक दर्जीलाई आफ्नो स्कूलबाट निकालिएपछि प्रिन्सिपल दिपक न्यौपाने निकै भावुक बनेर लेखे यस्तो स्टाटस,…पुरा विवरण हेर्नुहोस्
काठमाडौँ – बालकलाकार अशोक दर्जीलाई पछिल्लो ३ महिनादेखि अध्ययापन गराईरहेका बेथेल एकेडमीका प्रिन्सिपल तथा संचालक दीपक न्यौपानेले अशोक दर्जीलाई आफ्नो स्कूलबाट निकालिए पछि निकै भाबुक भएर फेसबुक स्टाटस लेखेका छन् . हेर्नुस् उनले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस: नमस्कार म दिपक न्यौपाने हजुर हरुको साथी आज म एकदमै खुसि छु, किन थाहा छ किन भने मेरो छोरा मेरो भाइ मेरो… Read More »